Mpamatsy mpanamboatra sy mpamokatra mpamokatra afovoany ambony sinoa China - Casting Minghe
Inona no atao hoe Centrifugal Casting
Afovoany dia teknika sy fomba fampidirana vy metaly amin'ny lasitra mihodina haingam-pandeha, ka ny metaly ranoka dia mihetsika afovoany hameno ny lasitra ary hamorona casting. Noho ny fihetsehana afovoany dia afaka mameno tsara ny bobongolo amin'ny làlan-kizorana ny metaly ranoka ary mamorona ny faritra malalaka an'ny fanariana; ny lavaka anaty varingarina dia azo alaina tsy misy ny fotony; manampy ny fanafoanana ny gazy sy ny fampidirana azy amin'ny metaly ranoka; misy fiantraikany amin'ny vy Ny fizotry ny kristaly manatsara ny toetra mekanika sy ara-batana amin'ny fanariana.
Araka ny toerana misy ny lozan'ny fihodinan'ny lasitra, ny fanariana centrifugal iraisana dia azo zaraina amin'ny fanariana centrifugal marindrano sy ny fananganana centrifugal mitsangana. Fanariana centrifugal raha ny axis rotation an'ny bobongolo dia anaty fanjakana marindrana na rehefa kely ny zoro misy tsipika marindrano (4 °) dia antsoina hoe casting centrifugal mitsivalana. Fanariana centrifugal raha ny axis rotation an'ny bobongolo dia mijoro amin'ny fanjakana mitsangana dia antsoina hoe casting centrifugal mitsangana. Fanariana centrifugal izay misy ny zotram-pihodinan'ny bobongolo manana zoro lehibe miaraka amin'ny tsipika mitsivalana sy mitsangana dia antsoina hoe casting centrifugal axis axis, saingy tsy dia ampiasaina firy.
Ny sehatry ny fampiharana Casting centrifugal
Ny filatsahana tombony lehibe amin'ny famokarana dia misy:
- Bimetal cast iron iron;
- latabatra vy tsy mahazaka hafanana eo ambanin'ny fatana fandoroana;
- Sodina vy tsy misy vy mirindra;
- Vaky amponga, peratra piston banga, kodiarana kankana alimo varahina;
- Casting miendrika endrika manokana toy ny impeller, solonify vy, mesons volamena sy volafotsy, valves kely ary rotors alim-bolan'ny alimina.
Ny fanariana centrifugal dia nampiasaina voalohany hamokarana fantsom-pandefasana fantsona, ary avy eo dia novolavolaina haingana io dingana io. Ao an-trano sy any ivelany, ny fizotran'ny fanariana centrifugal dia ampiasaina amin'ny metallurgy, harena ankibon'ny tany, fitaterana, fanondrahana sy masinina fanondrahana, fiaramanidina, fiarovam-pirenena, fiara sy indostria hafa hamokarana vy, vy ary firavaka vy tsy vy. Anisan'ireny, ny famokarana casting toy ny fantsom-by vy afovoan'ny sentrifugal, ny valin'ny vatan'ny motera fandoro anatiny ary ny tanany vita amin'ny hazo no be mpitranga indrindra. Ho an'ny fitaovana famoronana sasany sy ny fametahana fitaovana dia azo ampiasaina ihany koa ny fandatsahana ny hery afovoany ho an'ny akoran'ny bobongolo narendrika, izay tsy afaka manatsara ny maha-marina ny fanariana fotsiny, fa manatsara ny toetra mekanika amin'ny fanariana.
Ny casting miaraka amina vokatra famokarana dia misy:
- Sodina vy: Manakaiky ny 1/2 amin'ny vokatra isan-taona amin'ny vy an-tsokosoko eto an-tany dia misy fantsom-by novokarin'ny fanariana centrifugal
- Varingarin'ny silila misy motera diesel sy motera lasantsy
- Karazan-tanana vita amin'ny vy sy fantsom-by
- Bimetallic vy vita amin'ny tanany varahina, mitondra kirihitra alloys isan-karazany
- Amponga milina taratasy
Niorina tamin'ny 1995, China Minghe Casting dia singa famolavolana fenitra indostrialy ho an'ny lamina mamorona bobongolo ho an'ny fanodinana afovoany. Minghe dia ao amin'ny renivohitra indostrialy-Dongguan, Sina. Orinasa teknolojia avo lenta any amin'ny Faritanin'i Guangdong izy io. Manana atrikasa famokarana misy velarana fananganana 18,000 metatra toradroa izy. Izy io dia fitaovana miaraka amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famolavolana, ny fanariana, ny milina, ny fivondronana ary ny fitsaboana amin'ny tany. Io no ivon-toerana Dongguan R&D sy Ivon-teknolojia. Minghe Casting izao dia manana patanty famoronana 6 sy patanty modely ilaina amin'ny 20. Orinasam-pivarotana marika any amin'ny Faritanin'i Guangdong izy io. Manana mpiasa maherin'ny 230 ny orinasa, ao anatin'izany ny injenieran'ny famolavolana bobongolo 36 sy ny teknisiana 39; manana 40 fitaovana fanodinana CNC sy fitaovana fanodinana ankapobeny izy io. Singa 28, milina fandrefesana 3 mandrindra, ary scanner miverina 1. Amin'ny alàlan'ny famolavolana solosaina telo-refy, fandaharana, teknolojia fanodinana fanampiana amin'ny alàlan'ny solosaina, fampiasana fomba FM handefasana banga vita amin'ny aliminioma, miaraka amin'ny Minghe Casting dia namorona teknolojia firakotra TEFLON (TEFLON) sy ny orinasa Minghe Powder Coating Factory, ka ny kalitaon'ny bobongolo, ny marina, fahombiazana, Ny fiainana serivisy dia afaka mamaly ny takian'ny mpanjifa. Ny mpiasa ara-teknikan'ny orinasa dia mitarika ny fivorian'ny bobongolo, ny fampiasana, ny famokarana andrana, ny fikojakojana maimaimpoana ary afaka manome ny teknolojia fanodinana afovoany feno arakaraka ny filan'ny mpanjifa.
Ny mampiavaka ny casting Centrifugal
- Saika tsy misy fanjifana vy amin'ny rafitra gating sy ny rafi-riser, izay manatsara ny taham-pamokarana;
- Ny fotony dia tsy ampiasaina amin'ny famokarana casting haollow, noho izany ny metaly famenoana metaly dia azo hatsaraina bebe kokoa rehefa mamorona casting tubular lava, ny tahan'ny hatevin'ny rindrin'ny casting amin'ny halavany na savaivony dia azo ahena, ary ny fizotran'ny famokarana ny fanamoriana tanana sy fantsom-bozaka dia azo tsorina;
- Ny fanariana dia manana hakitroka avo lenta, kileman-toetra vitsivitsy toa ny pores sy ny fampidirana ny slag, ary ny toetra mekanika avo;
- Mora ny manamboatra barika sy paosin-vy vita amin'ny vy, toy ny tanany varahina tohanan'ny vy, horonan-taratasy bimetallika, sns. rehefa mamorona casting dia azo ampiasaina ny fivezivezin'ny centrifugal hampitomboana ny fahaizan'ny metaly mameno, noho izany dia azo vokarina ny fanariana rindrina manify.
- Misy fetrany sasany rehefa ampiasaina amin'ny famokarana casting miendrika endrika manokana.
- Tsy marim-pototra ny savaivon'ny lavaka anatiny fanipazana, somary marokoroko ny velaran'ny lavaka anatiny, ratsy ny kalitaony, ary lehibe ny tambin-karama;
- Ny casting dia mora misaraka amin'ny hery misintona manokana, noho izany dia tsy mety amin'ny casting izay mora misaraka amin'ny hery misintona manokana (toy ny varahina firamainty), ary indrindra tsy mifanentana amin'ny fandefasana alloys misy loto izay lehibe kokoa noho ny vy anidina.
Karazan-tsarimihetsika famokarana samihafa
Manaraka hatrany ny fepetra takian'ny mpanjifa sy ny fenitry ny serivisy an'ny orinasa i Minghe. Na aiza na aiza rohy famolavolana bobongolo, fivorian'ny bobongolo, fanesorana bobongolo, famokarana andrana ny bobongolo, fizotran'ny fanariana sns, misy injeniera voatokana hitazona anao amin'ny telefaona;
Ny sehatry ny famokarana Centrifugal Casting1 ▶
Ny sehatry ny famokaranaCentrifugal Casting2 ▶
Ny sehatry ny famokarana Centrifugal Casting3 ▶
Ny sehatry ny famokarana Centrifugal Casting4▶
Ny sehatry ny famokarana Centrifugal Casting5▶
Ny sehatry ny famokarana Centrifugal Casting6▶
Ny sehatry ny famokarana Centrifugal Casting7 ▶
Ny sehatry ny famokarana Centrifugal Casting8▶
Ny sehatry ny famokarana Centrifugal Casting9 ▶
Ny sehatry ny famokarana Centrifugal Casting10▶
Ny sehatry ny famokarana Centrifugal Casting11 ▶
Ny sehatry ny famokarana Centrifugal Casting12▶
Ny fanadihadiana momba ny tranga Minghe momba ny fananganana centrifugal
Ny serivisy fanamboarana Minghe Casting dia misy ho an'ny famolavolana ny tena zava-misy sy ny famokarana fantsom-bokatra ambany ka hatramin'ny avo ny fantsom-pahafatesanao, ny ampahany amin'ny fanariana fasika, ny ampahany amin'ny famatsiam-bola, ny ampahany amin'ny fanariana vy, ny ampahany amin'ny fanariana foam ary maro hafa.
Safidio ny mpamatsy Casting Centrifugal tsara indrindra
Amin'izao fotoana izao, ny ampahany manaparitaka afovoantsika dia aondrana any Amerika, Canada, Australia, United Kingdom, Alemana, France, Sout Africa, ary firenena maro hafa manerantany. Izahay dia ISO9001-2015 voasoratra anarana ary voamarin'ny SGS ihany koa.
Ny serivisy fanamboarana foibe fanalefahana centrifugal dia manome filaharana maharitra sy mora vidy izay mifanaraka amin'ny famaritana anao amin'ny fiara, fiara, aerospace, elektronika, sakafo, fananganana, fiarovana, ranomasina ary indostria maro kokoa. Haingana handefa ny fanontanianao na handefa ny sarinao mba hahazoana teny maimaim-poana amin'ny fotoana fohy indrindra. Mifandraisa aminay na mailaka sales@hmminghe.com hijerena ny fomba ahafahan'ny olonay, ny fitaovana ary ny fampitaovana mitondra kalitao tsara indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra ho an'ny tetik'asa famoahana foibe.